IBillund iye eRiga kwiAir Baltic: Ngoku kunyuka ukuhamba kweenqwelo moya
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » IBillund iye eRiga kwiAir Baltic: Ngoku kunyuka ukuhamba kweenqwelo moya
Airlines • isikhululo • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zeLatvia eziQhekezayo • iindaba • uthutho • Iindaba zeWired Travel
Iqabane lenqwelomoya elizinikeleyo kwesona sango sikhulu saseDenmark iminyaka emininzi, uBillund uqinisekisa ukuba i-airBaltic iyakwandisa inani leenqwelomoya ezisebenza eRiga ye-S19, inike abakhweli amathuba angakumbi okuya kwikomkhulu laseLatvia nangaphaya kwenethiwekhi yenqwelomoya ngaphezulu kwe-70 Iindawo zokufikela kulo lonke elaseYurophu, eRashiya, kwiCIS nakuMbindi Mpuma.
"Iindaba ezimnandi zokuba i-airBaltic ithathe isigqibo sokuqhubeka nokutyala imali kwisikhululo senqwelomoya saseBillund ngokongeza ezi nqwelomoya kwiishedyuli zayo zehlobo elizayo, zinika abakhweli ukhetho olungakumbi kunye nobhetyebhetye ekunxibelelaneni nenkunzi yaseLatvia nangaphaya kwenethiwekhi ekhulayo yenethiwekhi," utshilo uJan UHessellund, u-CEO weSikhululo senqwelomoya saseBillund. “Ukwanda kungqina ukuba i-airBaltic luphawu olomeleleyo kwindawo yethu yokugcina amanzi, kwaye ngoku umntu ophetheyo ukwinqanaba lokukhula okuqinisekileyo, ndiqinisekile ukuba ezi nqwelo moya zongezelelekileyo azizukuthandwa nje kuphela ngabakhweli bethu, kodwa abo bafuna unxibelelwano olungcono ngeRiga. ”
UWolfgang Reuss, uLawulo lweNethiwekhi ye-SVP uthe: “Siyavuya kakhulu ukukwazi ukunika abathengi bethu okuphuculweyo kunye nokwandiswa kweendlela zokuhamba phakathi kweBillund neRiga, kwaye sidlula eRiga ukuya ngaphezulu kweendawo ezingama-70 kuthungelwano lwethu oluquka iYurophu, Middle East, Russia, I-CIS kunye neBaltics. Isikhululo senqwelomoya saseBillund sibe lihlakani elihle ekuphuhliseni ishishini lethu kwiNtshona yeDenmark kwaye sijonge phambili kwiminyaka emininzi yentsebenziswano eyimpumelelo ezayo. ”
Iindaba ezivela kwi-airBaltic zilandelayo kwisibhengezo samva nje sokuba iWizz Air izakuqhubela phambili indlela eya eMpuma Yurophu isuka eBillund kunyaka olandelayo, iqinisekisa ukuba ukusukela nge-2 Matshi izakongeza inkonzo-ngeveki evela eKiev Zhulyany. Ngolu lwandiso, ngaphezulu kokunyuka kwamaxesha e-airBaltic, inani leenqwelo moya ezihamba ngeveki ukusuka eBillund ukuya eMpuma Yurophu ziya kukhula phantse ngama-20% kwi-S19.